May 2020 : Access Spectrum
Connecting the dots in your digital transformation
+95-1- 380 900
Connect / Collaborate
Protect / Optimise / Infrastructure
SOFTWARE LICENSING & BUSINESS APPLICATION
SAP Software Solutions
Products engineered to help you realize your Digital Future
ကူးစက်မြန်အဆုတ်ရောင် ရောဂါ (COVID -19ရောဂါ) ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ကုသရေးလုပ်ငန်းများတွင် လိုအပ်သလိုအသုံးပြုနိုင်ရန် အတွက် Access Spectrum မိသားစုမှ အလှူငွေကျပ်သိန်း(၅၀၀)ကို ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနသို့ လှူဒါန်း
Posted on May 6, 2020 May 6, 2020 by thuta.win
လတ်တလောဖြစ်ပွားလျက်ရှိသော ကူးစက်မြန်အဆုတ်ရောင် ရောဂါ (COVID -19ရောဂါ) ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ကုသရေးလုပ်ငန်းများတွင် လိုအပ်သလိုအသုံးပြုနိုင်ရန် အတွက် Access Spectrum မိသားစုမှ အလှူငွေကျပ်သိန်း(၅၀၀)ကို ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနသို့ မတ်လ ၂၄ရက်နေ့မနက်ခင်းတွင် လှူဒါန်းမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ COVID-19 ကူးစက်လွယ် ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ ကိုတိုက်ဖျက်ရာတွင် တာဝန်ယူ ကြိုးစား၍ မိမိတို့၏အသက်ကို ပဓာနမထားပဲ ရှေ့တန်းမှ ကုသပေးနေကြသော ဆရာဝန်များ နှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအားလုံးကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ Access Spectrum မိသားစုက အထူးပင်ကျေးဇူးတင်လျက်ရှိကြပါတယ်။ ယခုလို ကူးစက်လွယ် ရောဂါပြန့်ပွားနေစဉ်ကာလအတွင်း ကျန်းမာအောင်နေထိုင်ဖို့၊ လူစုလူဝေးထူထပ်သော နေရာများသို့ မလိုအပ်ဘဲသွားရောက်ခြင်းများ မပြုလုပ်ဖို့နှင့်တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ကူညီစောင့်ရှောက်ဖေးမကြဖို့ကိုလည်း အထူးပဲတိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီအနေဖြင့် ကျန်းမားရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှချမှတ်ထားသောကျန်းမာရေးဟောပြောချက်များ၊ တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းမှူ နည်းလမ်းများကို စနစ်တကျ တိကျစွာ လိုက်နာခြင်းဖြင့် ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားခြင်းကို အကောင်းဆုံး ကြံ့ကြံ့ခံ […]
Posted in CSR	| Tagged MakeADifference, Stopthespread
Top Reasons Why Customers Choose PowerStore Storage Comments Off on Top Reasons Why Customers Choose PowerStore Storage
Business Pcs နဲ့ Consumer Pcs ခြားနားချက်များ Comments Off on Business Pcs နဲ့ Consumer Pcs ခြားနားချက်များ
PowerStore Positioning & Sizing Comments Off on PowerStore Positioning & Sizing
Dell Compute Product များကိုလေ့လာကြည့်ခြင်း Comments Off on Dell Compute Product များကိုလေ့လာကြည့်ခြင်း
Dell EMC Recovery Point for Virtual Machines (RP4VMs) Comments Off on Dell EMC Recovery Point for Virtual Machines (RP4VMs)
ERP System (2)
Access Spectrum Computers Control of Financials Dell Dellcomputers DellEMC DellPartner Dellpowerstore Dell RP4VMs Dell Storage Digital Transformation ERP ERP Software ERP System Implementation IT Solutions Provider ITsolutionsprovider MakeADifference Product Management RemoteManagement Remoteworking SAP SAP Cloud ERP System SAPERP SAP ERP SAPMyanmar Software Solutions Stopthespread Storage VM Ware VMware WorkspaceONE YYIM
Top Reasons Why Customers Choose PowerStore Storage
Business Pcs နဲ့ Consumer Pcs ခြားနားချက်များ
PowerStore Positioning & Sizing
Dell Compute Product များကိုလေ့လာကြည့်ခြင်း
Dell EMC Recovery Point for Virtual Machines (RP4VMs)
Copyright © 2022 Access Spectrum. All rights reserved.
Developed by Iconic Digital Branding Solutions Ltd.
Software Licensing &